Tsvaga zvimwe zvezvinonhuwira zhizha rino 2021 | Bezzia
Susana Garcia | 03/06/2021 20:00 | Runako, Perfumes
Mapefiyumu akafanana nenguo uye zvigadzirwa, zvinoshanduka mwaka wega wega, pane akasiyana maitiro uye zvinonaka. Hatifanirwe kugara tichishandisa hwema hwacho nekuti kune zvakawanda zvinonhuwira uye hwema izvo zviri nani kuchinjirwa kune mamwe mamiriro kana nguva. Ndokusaka mwaka wega wega zvinonhuwira zvitsva zvichibuda kuti zvinakidze, senge isu tinawo muzhizha rino 2021.
Tichataura nezvevamwe zvinonhuwira zhizha 2021, zhizha rakazara netariro yekudzosa hupenyu hwenguva dzese. Pasina kupokana iyi izhizha ratiri kuda kunzwa idzva uye kutsiva yakarasika nguva uye kune izvi isu tine mazano mazhinji ekukupa iwe nezvinonhuwira zvemarudzi ese.
1 Chii chiri hwema hwezhizha
2 Lemon Muchero Unganidzo naDolce & Gabbana
3 Kupenya naAristocrazy
4 Escale à Portofino naDior
5 Jil Sander Zuva Parfum
6 Rakanaka Bindu naMancera Paris
Chii chiri hwema hwezhizha
Ose anonhuwirira ezhizha anodzoka nezvinonhuwirira zvinoenderana nemwaka uno. Kupisa nekunaka kwemamiriro ekunze zvinoreva kuti zvinonhuwirira hazvina kufanana neapo munguva yechando. ndinoziva ivo vanotsvaga akareruka maficha uye hwema unomutsa zhizha. Hwema hunofuridzirwa negungwa, zuva, michero inopisa, macitrus kana maruva senge maruva eorenji. Aya ndiwo anowanzo ari mapefiyumu anoonekwa munguva yezhizha, vhezheni itsva, ine maruva akareruka uye kunhuwirira kwemichero, yakanakira zuva nezuva.
Lemon Muchero Unganidzo naDolce & Gabbana
Gore rino femu yeDolce Gabbana inotitaridza muunganidzwa wakafemerwa nezvibereko, iine bata wekunaka asi uchibva kure nekukomba nekapu yakaita kunge muchero. Takasarudza kunhuhwirira kwemoni asi kune mamwe akafuridzirwa neorenji neinanazi, nekuda kwekunakidzwa kwakasiyana. Iwo mutsara we eau de toillette iyo yakafuridzirwa nekubhadhara mutero kune zvinonhuwira zveSicily. Iyo koloni inoshandisa Sicilian ndimu uye maCalabrian bergamot mairi ane distilled mandimu petitgrain. Mune ayo epakati manotsi ndiwo musimboti weginger uye semanotsi ekupedzisira Haiti vetiver yehosi yehuni.
Kunhuwirira uku kwakatangwawo gore rino uye kunoratidza bhodhoro rakanaka rakapedziswa muchimiro che newt. Kunhuwirira uku ndekwa maruva emumba yemhuri. Yavo makuru manotsi akachena maruva uye macitrus. Iwo epamusoro manotsi ipari, mandarin, bergamot uye plum, mumoyo tinowana maruva eorenji emuti weorenji, inova yakasarudzika munhuhwi wezhizha, neroli, jasmine uye magnolia. Mune ezvinyorwa zvinyorwa mune musk, caramel, patchouli, amber uye vetiver. Iyo inonhuwira nyowani uye inonakidza yezhizha rino.
Escale à Portofino naDior
Kunyangwe kunhuwirira uku kusiri kutsva, taifanirwa kutaura nezvazvo, sezvo ichikwirisa kunaka, kuve yakakwana pazororo rakanaka. Mukati me Cruise Unganidzo, Dior akatanga iyi kunhuwirira kubva kumhuri inonhuwirira yemucitrus. Pakutanga tinocherechedza bergamot, ndimu uye zviyo zvidiki, mumoyo mune maruva eorenji, maamondi nemajuniper mabriji. Mune zvinyorwa zvekupedzisira tinogona kunhuwa musidhari, cypress, musk uye galbanum.
Jil Sander Zuva Parfum
Kunhuwirira kutsva kwakatangwa nekambani Jil Sander kunotarisira kurondedzera kunhuwirira kwezuva, kunzwa kunoperekedza isu munguva yezhizha. Iyo pefiyumu inotiratidza manotsi eshuga, ylang-ylang uye tonka bhinzi. Idzi hwema hwekunhuhwirira hwakagadzirirwa kuratidza iko kunzwa kwekudziya kunoitika muzhizha, zano ratisingakwanise kuramba. Uye zvakare, muunganidzwa ivo vatangisawo pefiyumu yevarume.
Rakanaka Bindu naMancera Paris
Aya maruva uye amber kunhuwirira kunoitirwa kutevedzera gadheni rakasvibira. Mune zvinyorwa zvepamusoro tinocherekedza mhiripiri, sinamoni uye mandarin tsvuku. Mumoyo mune maruva manotsi ane orenji anotumbuka, tuberose uye Turkish rose. Mumashure tinowana ambergris, poda musk, inotapira caramel uye nezvinonhuwira. Iyo hwema hwakakwana kune avo vanofarira hwema zvakanyanya maruva pane muchero muzhizha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Mapefiyumu ezhizha 2021
5 tsika dzinobatsira kusimudzira bonde nemumwe wako